ဘာကြောင့်ပိုကောင်းတဲ့နားထောင်သူဖြစ်လာရတာလဲလုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သော့ချက်ဖြစ်တယ် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ပိုမိုကောင်းမွန်သောနားထောင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်လုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အဓိကဖြစ်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 12, 2021 မေလ 11, 2021 တံခါးကိုအလုပ်လုပ် ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick
ခန္ဓာကိုယ်၏ဘာသာစကားသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်နှိပ်ထားသောနှုတ်ခမ်းများ၊ ခေါက်ထားသည့်လက်များ၊ မျက်စိနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်လူနှစ် ဦး အကြားအကွာအဝေးများခြင်းကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအယာများသည်စကားလုံးမဟုတ်သောညွှန်းကိန်းများဖြစ်သည်။
အောက်ပါစကားလုံးများကိုရေးသားရန်မှာပင်သိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ ကောင်းမွန်သောနားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်သည်အရေးအကြီးဆုံးကိရိယာဖြစ်သည် မဆိုထိရောက်သောဆက်သွယ်ပြောဆိုအထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာပါ။
လုံခြုံရေးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့မဖြစ်သင့်သောနေရာများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရလိုသော (သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရယူလိုသူ) များ၏ဆန္ဒပြမှုများကြောင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့တောင့်တင်းခိုင်မာ။ မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည့်အခြေအနေများတွင်ထားလေ့ရှိသည်။
လုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်းများသည်နေ့စဉ်ပြည်သူလူထုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးအလုပ်၏တာ ၀ န်များသည်ခက်ခဲသော (သို့) အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောလူများ၏ကိုင်တွယ်ခြင်းထက်များစွာဝေးကွာသည်။
လုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်းများသည်နေ့စဉ်ပြည်သူလူထုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးအလုပ်၏တာ ၀ န်များသည်ခက်ခဲသော (သို့) အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောလူများ၏ကိုင်တွယ်ခြင်းထက်များစွာဝေးကွာသည်။ ဒါကြောင့်နားထောင်ခြင်းကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ၎င်းသည်အကြမ်းဖက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်၊ ပြtoနာများအတွက်သံတမန်ရေးရာဖြေရှင်းမှုများအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်၊ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များဘက်မှလည်းစေတနာကောင်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
စီးပွားရေးလောကတွင် ၀ န်ထမ်းများအကြားကန့်သတ်ချက်မဲ့ခြင်းခံစားခွင့်များထက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအပေါ်တွင် ပို၍ လွှမ်းမိုးမှုမရှိချေ။ စီမံခန့်ခွဲမှုသည်၎င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများ၏စိုးရိမ်မှုများကိုနားမထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့ပြောသောအရာများကိုလုံလောက်စွာထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်သူတို့ကုမ္ပဏီအတွက်သီးခြားစီဖြစ်နေသည်ကိုစတင်မြင်တွေ့ရသည်။ ဤအတွေးအခေါ်သည် ၀ န်ထမ်းများအားကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်မှုတွင်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါ ၀ င်မှုတွင်မဆို ၀ န်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်စေပြီးထိရောက်စွာတားဆီးသည်။
အစိုးရများနှင့်နိုင်ငံရေးပါတီများက“ နားမထောင်” သို့မဟုတ်“ ဂရုမစိုက်” ဟူသောခံစားချက်များသည်မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက်နည်းပါးခြင်းသို့မဟုတ်တောင်းဆိုနိုင်သည့်အစွန်းရောက်ကိုယ်စားလှယ်များရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရနိုင်သည့်လွတ်လပ်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင်လည်းဤအချက်သည်မှန်ကန်သည်။ ဤကဲ့သို့တည်ထောင်ခြင်းကိုကိုယ်စားမပြုရရန်ဤကဲ့သို့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းခံစားခွင့်ကိုခံစားခွင့်ရရန်။
နိုင်ငံရေးသမားများ၊ စီအီးအိုများ၊ မန်နေဂျာများနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ other မှပါ ၀ င်သောအခြားပုဂ္ဂိုလ်များသည်မကြာခဏကြားရလေ့ရှိသည်။ သူတို့၏နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုဝေဖန်သည့်အခြားနည်းလမ်းမဟုတ်ပါကဘာလဲ။
ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးကိုထိုသို့သောအဟန့်အတားများသည် micro၊ မိသားစု ၀ င်များ၊ အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ကလေးများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုသဘောဆောင်သောဆက်ဆံရေးသည်အခြားသူများ၏နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်အပေါ်များစွာမူတည်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်တစ်ဖက်သတ်ဆက်ဆံရေး၊ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းနှင့်ပconflictိပက္ခများကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
တကယ်ရှိပါတယ် အကြောင်းပြချက်အတော်များများ လူတွေဘာကြောင့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားမထောင်တာလဲ၊ ငါတို့အားလုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာအပြစ်ရှိတယ်။
ငါတို့ထင်မြင်ချက်ပေးသူနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြီလား။ ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ဆွေးနွေးနေသည့်အကြောင်းအရာအပေါ်ခိုင်မာသောထင်မြင်ချက်များကိုကိုင်ပြီး? (၎င်းသည်ဘာသာရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးကဲ့သို့သောဘာသာရပ်များတွင်အလွန်တွေ့ရလေ့ရှိပြီး၎င်းအကြောင်းအရာများသည်သူငယ်ချင်းများကြား၌ပင်အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်) ။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများမှပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်တစ်ခုစီရှိသောနေ့စဉ်ပြဇာတ်များနှင့်ဆက်ဆံသည်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အိပ်ရေးမ ၀ င်တော့သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းများစွာဆုံးရှုံးသည်။ ကျိန်းသေအိပ်စက်ခြင်း အခြားသူများကိုနားထောင်ရန်ခက်ခဲစေသည် သူတို့ပြောဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အရာတွေကိုစုပ်ယူ။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေသတင်းကောင်းမှာ - နည်းစနစ်အရေအတွက် သင်၏အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်သင်အလုပ်ခန့်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး စွာသင်သည်အခြားသူများအားသင်ပြောခဲ့ပြီးသောစကားများကိုအတိုချုံးပြောခြင်းဖြင့်သင်နားထောင်နေကြောင်းအခြားသူအားပြနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး၊ ၀ ယ်သူသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်မိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း (သို့) သူတို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးသည်နှင့်သင်တုန့်ပြန်ချက်များကိုသူတို့တို့ပြောခဲ့သမျှအတိုချုပ်အားဖြင့်တုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ဒီအကျဉ်းချုပ်ကိုသင်နားထောင်နေကြောင်းအတည်ပြုချက်အဖြစ်ဖော်ပြပြီးသင်မဟုတ်တာကိုပြသခြင်းမဟုတ်ဘဲမေးခွန်းတစ်ခုပုံစံဖြင့်ဖော်ပြပါမည်။
စကားပြောနေသူနှင့်လည်းမျက်လုံးချင်းထိသင့်သည်။ သင်သည်သူတို့၏မျက်နှာကိုအဆက်မပြတ်မကြည့်လိုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လူကိုမသက်မသာဖြစ်စေသောကြောင့်လူအများပြောနေသည့်အချိန်အများစုအတွက်သူတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်သင်၏ရိုးသားမှုကိုသာမကသင်၏အာရုံစိုက်မှုကိုသာသူတို့အပေါ်သို့ ဦး တည်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်အားစကားပြောနေစဉ် (သင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်လုံခြုံရေးပြissueနာကိုသတိမပြုမိလျှင်) ဤအချက်ကိုဘေးဖယ်ထား။ သင်၏ဖုန်း၊ သင်၏လက်ပတ်နာရီသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အခြားအရာများမှသင့်ကိုအာရုံမပျံ့လွင့်စေပါနှင့်။
လူတစ်ယောက်ပြောနေသည့်အရာနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများမေးခြင်းသည်သင်၏နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်သည့်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားပွင့်လင်းသောမေးခွန်းများဖြစ်သင့်သည် (ဆိုလိုသည်မှာရိုးရှင်းသော 'ဟုတ်သည်' သို့မဟုတ် 'မဟုတ်' ဟုအဖြေပေးသောမေးခွန်းများမဟုတ်ဘဲ) ထိုသူအားအပိုင်းအစကိုပြောပြီးမှသာမေးသင့်သည်။ စကားပြောနေစဉ်လူတစ် ဦး အားမေးခွန်းတစ်ခုမေးရန်ကြားဖြတ်ခြင်းကိုသင်အောင်မြင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
အတိတ်ကအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြန်ပြောင်းပြောပြခြင်း (လက်ရှိဆွေးနွေးမှုမှသို့မဟုတ်တူညီသောလူနှင့်ယခင်အစောပိုင်းကစကားပြောဆိုခြင်း) သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းနှင့်သူတို့ပြောသောအရာများကိုအမှန်တကယ်နားထောင်နေကြောင်းတစ်စုံတစ် ဦး အားပြသရန်အခြားအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားသူအားကြားဖြတ် ၀ ါကျမှမည်သည့်အခါမျှမနှောက်ယှက်ပါနှင့်၊ ထိုသို့မလုပ်ပါနှင့်၊ မလေးမစားပြုခြင်းသည်မြင့်မားသောရိုသေလေးစားမှုမရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ စကားပြောနေစဉ်လူများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်၊ သူတို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများကိုပျက်ပြားစေပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအတွေးအခေါ်များဖလှယ်ခြင်း၏မျှော်လင့်ချက်အားလုံးကိုချိုးဖဲ့သည်။
ဤအချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ပြောဆိုသူနှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုပြောဆိုခြင်းပြီးဆုံးသည်အထိဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အရေးကြီးသည်။ ဤသည်အလေ့အကျင့်များနှင့်သည်းခံခြင်းကြာပါသည်။
ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ နှုတ်ခမ်းများ၊ ခေါက်ထားသည့်လက်များ၊ မျက်လုံးနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်လူနှစ် ဦး အကြားအကွာအဝေးများစသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအယာများမှာစပီကာအားလူတစ် ဦး သည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်သို့မဟုတ်ရန်လိုနေသည်ဟုခံစားနေရသည်။ ဤအပြုအမူများကိုသင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိပါကပိုမိုနူးညံ့။ ပိုမိုပွင့်လင်းသောကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာမှီခိုရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေခြင်း၊
လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကား၊ ကိုယ်ဟန်အမူအရာနှင့်မျက်နှာအသွင်အပြင်များကိုတုပသည့်သိမ်မွေ့သောအနုပညာလက်ရာဖြစ်ခြင်းသည်လူတို့အကြားစာနာနားလည်မှုနှင့်နားလည်မှုခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤသည်ကိုစိတ်ပျက်ပြီးစိတ်ပျက်နေသောသူတို့အားသက်သာစေရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အဆုံးစွန်သောအကြံပေးချက်များပုံစံများကိုဖော်ပြရန် နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သောဆက်သွယ်ရေးအကယ်၍ သင်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ပြောဆိုသူဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေပါကအလွန်အရေးကြီးသည်။ သငျသညျအစဉ်အမြဲန်းကျင်သောအချက်ကိုသိသင့်ဖြစ်သင့်သည် ဆက်သွယ်မှုအားလုံး၏ ၈၅% သည်နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်ပါ.
ဤရွေ့ကားနှင့်အခြားနည်းစနစ်ချေါဘာ၏ကျွမ်းကျင်မှုဖွဲ့စည်း ''တက်ကြွစွာနားထောင်ခြင်း' တက်ကြွသောနားထောင်သူများသည်အကဲဖြတ်ခြင်းမခံရ၊ အတ္တဆန်သော၊ စကားစမြည်ပြောခြင်း၌တိတ်ဆိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်မတိုခြင်းများကိုခုန်။ ဖြည့်ရန်စိတ်ထက်သန်မှုနည်းသည်။ စိတ်ကူးတစ်ခုမှာ counterpoint ကိုချက်ချင်းကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် sound board အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ တက်ကြွစွာနားထောင်ခြင်း၏လက်တွေ့ကျသောလျှောက်လွှာ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့်လူတို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်မှုစွမ်းရည်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတိုးတက်စေရန်နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အပြင်သင်နှင့်ဆက်သွယ်သူအားလုံးထံမှယုံကြည်မှုနှင့်လေးစားမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်နည်းလမ်းကောင်းလည်းဖြစ်သည်။
တက်ကြွစွာနားထောင်ခြင်းသို့ဆိုလျှင်ပိုမိုကြွယ်ဝသော၊ သက်သောင့်သက်သာရှိသောဘ ၀ အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိပါက၎င်းသည်သင်၏အလုပ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေလိမ့်မည်။
ပိုကောင်းတဲ့နားထောင်သူဖြစ်လာခြင်း အများပိုင်သတင်း လုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်း
တံခါးများကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အမြဲတမ်း SIA အပြင်ဘက်တွင်ရှိသောအဓိကဗြိတိန်နိုင်ငံ၏“ တံခါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့” အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးတံခါးပေါက်ကြီးကြပ်သူများနှင့်လုံခြုံရေးကန်ထရိုက်တာများ / ကုမ္ပဏီများနှင့်နီးကပ်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။
ACCSH ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာလုပ်သလဲ။
IRS သည်လစဉ်ကလေးအခွန်ပေးဆောင်ခွင့်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သောမိသားစု ၃၆ သန်းကျော်ထံသို့စာများပေးပို့နေသည်။ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှစတင်သည့်ငွေများ
တန်းတူရေးထောက်ခံသူ Greshun De Bouse သည်အမျိုးသား CAPHPACH နေ့အတွက် MI အရာရှိ Eastpointe အားချီးကျူးသည်
လက်ဝတ်ရတနာများကိုရောင်း ၀ ယ်ပါ။ လက်ကားနှင့် B2B ဈေးတွင်ဈေးချိုသောခေါင်းဆောင်
အဝတ်အထည်များ ၀ ယ်ပါ - လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်၏စျေးနှုန်းချိုသာသောခေါင်းဆောင်
သင်၏ Eco-Friendly စီးပွားရေးအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖန်တီးနည်း
VPS vs. Cloud Hosting - သင်သိထားရမည့်ထူးခြားချက် ၅ ခု
ဒီနွေရာသီမှာကြိုးစားကြည့်ဖို့5အဖွဲ့အားကစား
ကလေးဘဝပညာရေးနှင့်သင်မိဘတစ် ဦး အနေဖြင့်မည်မျှကူညီနိုင်မည်နည်း
IRS သည်ဇွန်လ ၁၅ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေသောအခွန်ထမ်းများအားသတိပေးသည်